Isco oo ka baxay aamusnaanta, kadib markii uu si cad u weeraray tababare Solari – Gool FM
(Real Madrid) 07 Feb 2019. Xidiga kooxda Real Madrid Francisco Isco ayaa ka baxay aamusnaanta si uu kaga hadlo xaalada adag uu kaga hoos noolyahay tababaraha Los Blancos ee Santiago Solari.
Isco ayaa si kulul ugu weeraray tababare Santiago Solari boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka, isagoo ka jawaab celinayay hadal uu sheegay laacibkii hore kooxda Real Madrid Rubén de la Red kadib kaasoo sheegay:
“Isco waa inuu ogaadaa in Real Madrid aysan u joojin doonin ciyaaryahan kasta, xidig walba ee kooxda ku sugan wuu fiican yahay, hadii uusan qaab ciyaareed fiican sameynin, xidig kale ayaa is muujinaya”.
Yeelkadeed Isco oo fariintiisan ku muujinayay in uu la kulmay dulmi cad, isla markaana uusan helin fursada ay heleen saaxiibadiis kale ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan si buuxda ugu raacsanahay Rubén de la Red, laakiin marka aadan helin fursad la mid ah tan saaxiibadaa oo kale, waxbaa is bedelaya”.
“Wali waan shaqeynayaa, waxaana u dagaalamayaa sugitaanka inaan helo fursad… Hala Madrid!”
Waa markii ugu horeysay uu Francisco Isco ka hadlo xaalada uu haatan kaga sugan yahay kooxda Real Madrid, wuxuuna si cad u lulimyay booskiisa tan iyo markii uu kooxda yimid Solari, wuxuuna daris la noqday kursiga keydka, taasoo muujineysa inuu ku guuldareystay in uu kalsooni ka helo macalinka reer Argantina.
10-Khabiir oo si wayn u Falanqeysa Ciyaaraha oo doortay Cidda ku guuleysanaysa Premier League....(Ma LIVERPOOL ayay u Codeeyeen mise MAN CITY??)
Meydka Sala oo ugu dambeyn la helay.....(Kubbada Cagta adduunka oo ka wada Tacsiyeesay)